Bible ọ na-ekwu na anyị kwesịrị n'ogige atụrụ gị na ogwe aka na-emechi anya gị mgbe anyị na-ekpe ekpere? | Apg29
Bible ọ na-ekwu na anyị kwesịrị n'ogige atụrụ gị na ogwe aka na-emechi anya gị mgbe anyị na-ekpe ekpere?
Ma ọ bụ bụ ihe kasị nkịtị n'ụzọ na anyị na-arịọ unbiblical?
Mgbe Jizọs kwuru okwu banyere onye ọnaụtụ ka o weliri bụghị anya n'eluigwe mgbe ọ jụrụ Chineke maka ebere na ọmịiko. Gịnị mere Jizọs zuru ezu? N'ihi na ọ na-eji na-ekpe ekpere na-emeghe anya tụgharịa na mbara igwe!
Ka anyị guzosie ike ozugbo:
E nweghị Bible atụ na ha kpere ekpere na apịaji aka, ma ọ bụ n'ebe ọ bụla atụ na ha mechiri anya ha ka ha na-ekpe ekpere! Ya mere ebe i na i kwesịrị snap aka-ha na-emechi anya gị mgbe ị na-ekpe ekpere? Ee, ọ bụghị si Bible!
Olee otú Jizọs na Bible?
John 11:41. Mgbe ahụ, ha wepuru nkume n'ebe nwoke ahụ nwụrụ anwụ dina. Na Jizọs leliri anya wee sị: Nna, ana m ekele gị na ị nụwo olu m.
Mgbe Jizọs kelere Nna ya, na o weliri ya anya. O kpere ekpere, na -emeghe anya!
E nwere otu ihe atụ ọzọ nke Oziọma Jọn banyere Jesus bönesätt:
John 17: 1st Mgbe okwu Jizọs, na weliri anya n'eluigwe , si, Nna, oge awa ahụ eruwo. Ekele gị Ọkpara, na gị na Ọkpara ya na-ike ekele gi:
Jizọs leliri anya elu lee eluigwe mgbe o kpere ekpere. N'ihi ya, anyị na-ahụ n'ụzọ doro anya na ọ bụ Akwụkwọ Nsọ na-ekpe ekpere na ha na anya oghe! Ya mere, gịnị na-agbalị na-ekpe ekpere na Akwụkwọ Nsọ n'ụzọ? Oge ọzọ ị na-ekpe ekpere, ebuli anya gị na mbara igwe! Ikpe ya otú ahụ Jizọs mere!
Jesus mgbe niile buliri ya anya n'eluigwe, otú a kwa ka ogbe:
Matiu 14:19. Mgbe ahụ, o nyere iwu ka ndị mmadụ na-anọdụ ala na ahịhịa. O we were ogbe achịcha ise na azụ abụọ ahụ, na -achọ elu-igwe , gọzie ya, nyawa achịcha, nye ha ka ha na-eso ụzọ, na-eso ụzọ ya na ndị mmadụ.
Ka anyị hụ ihe ọzọ atụ.
Luke 18:13. Ma onye ọnaụtụ ahụ guzo n'ebe dị anya nakwa na ọ ga-adịghị ọbụna ileli anya ya n'eluigwe, ma iti aka n'obi-ya, si, Chineke, ka obi m onye mmehie.
1 Tim 2: asatọ M mere chọrọ ka ndị mmadụ nọ n'ebe nile ekpe ekpere ma na-ebuli nsọ aka, enweghị ọnụma na obi abụọ.
Paul chọrọ ka ha na-ekpe ekpere na weliri aka. Ọ na-ekwu ihe ọ bụla banyere clasped. Ihe kpatara nke a bụ na ọ na vanligate ụzọ kpee ekpere bụ na-akpọlite ​​aka. Ma ebe-eme omenala na mmadụ kwesịrị snap aka-ha? Ọ dịghị, ọ bụ site na Bible ọ bụla ikpe.
Mgbe ị na-ebuli ha aka Chineke ga-emepe ya maka ya n'ụzọ dị iche ma ọ bụrụ na ha ga-ha aka apịaji, apịaji ma ọ bụ na aka na ya akpa.
Gbalịa ya onwe gị na ị ga-achọpụta n'onwe gị ihe ọ dị ka.
Rịba ama na ha ga-welie aka ha mgbe ha na-ekpe ekpere. "... na-ekpe ekpere na ebuli nsọ aka ..." Ke adianade do, mara na ha ga-eme otú n'ebe nile . N'ihi ya, ọ bụ otú ndị bönesätt.
Nke a na-akpọlite ​​aka bụghị a ọhụrụ mepụtara nke Paul. Ọ na-ekwu banyere ya na Old Testament.
1 Ndi Eze 8:54: "Mgbe Solomon kwuchara ihe ndị a, na-ekpe ekpere ma na-akpọku Jehova, o bilie ebe ịchụàjà nke Jehova, ebe ọ na-ama ya n'ala-eji aka ya weliri na mbara igwe."
Abụ Ọma 63: 4: "M ga-agọzi gị dị ka ogologo ka m dị ndụ, na aha gị, m ga-ebuli m elu aka."
Psalm 141: 2: "Ka ekpere m nti tupu ị na-dị ka ihe nsure ọkụ, na-eweli aka m dị ka mgbede àjà."
Abụ Ákwá 3:41: "Ka anyị jiri obi anyị na anyị aka Chineke n'eluigwe!"
Ikpeazụ Bible see okwu, anyị na-ahụ na ọ ga-obi anyị na-ahụ mgbe anyị ebuli anyị aka Chineke.
The Bible na-akụziri anyị, mgbe ahụ anyị nwere ike ebuli anyị aka na anya ka Chineke mgbe anyị na-ekpeku ya ekpere. Ọ bụ na Akwụkwọ Nsọ ụzọ.